काँग्रेसको सहयोगबिना प्रचण्डले चितवन-३ जित्छन्? :: चेतना गुरागाईं :: Setopati
काँग्रेसको सहयोगबिना प्रचण्डले चितवन-३ जित्छन्?
सन्जीव बगाले काठमाडौं, असोज १९
नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले चितवन क्षेत्र नम्बर-३ बाट संसदीय निर्वाचन लड्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
उनले चितवनबाट निर्वाचन लड्ने घोषणा गर्दै गर्दा माओवादी काँग्रेससँग गठबन्धनमा थियो। काँग्रेस-माओवादीबीच संसदीय चुनावमा पनि तालमेल हुने चर्चा थियो। धेरैलाई लागेको थियो, चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा काँग्रेसले प्रचण्डलाई साथ दिनेछ, किनकि प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाललाई मेयरमा निर्वाचित गराउन उसले साथ दिएको थियो। चितवनको यो क्षेत्रमा परम्परागत रुपमै काँग्रेस बलियो छ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर ४ बाट काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला निर्वाचित भएका थिए। २०६४ सालमा बाँकेबाट चुनाव हारेका कोइराला सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र खोज्दै ०७० सालमा चितवनबाट पनि उठेका थिए।
अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। एमाले-माओवादी चुनावी गठबन्धन मात्र भएको छैन, उनीहरुले पार्टी एकता नै गर्ने निर्णय गरेका छन्। यता, काँग्रेस-माओवादी सम्बन्ध चिसिएको छ।
यो अवस्थामा प्रचण्डले चितवन-३ बाट चुनाव जित्छन्?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्न सबभन्दा पहिले पछिल्लो स्थानीय चुनावमा यो क्षेत्रमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी पक्षमा खसेका मत विश्लेषण गर्नुपर्छ।
०७० सालको चुनावमा चितवनमा जम्मा ५ निर्वाचन क्षेत्र थिए। अब आउने निर्वाचनमा तीन क्षेत्र मात्र कायम छन्। तीन नम्बर क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकाका १९ वटा वडा- ६, ८, ९, १३, १४, ५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७ र २८ पर्छन्। त्यसबाहेक ९ वटा वडा भएको माडी नगरपालिका पनि तीन नम्बरमै पर्छ ।
भरतपुर महानगरका यी १९ वटा वडामध्ये काँग्रेसले १० वटा वडा स्थानीय तह निर्वाचनमा जितेको छ। ६ वटा वडा एमालेले जितेको छ भने ३ वडा माओवादीले जितेको छ।
माडी नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी र उपमेयरमा एमाले विजयी भएको छ। यो नगरपालिकामा एमालेले ५ वटा वडामा जितेको छ भने माओवादीले ३ र काँग्रेसले १ मा जितेका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाका यी १९ वटा वडामा नेपाली काँग्रेस वडाध्यक्ष उम्मेदवारले जम्मा २३ हजार ४ सय ८५ मत पाएका थिए। यी वडामा एमाले उम्मेदवारले २० हजार ८ सय ४३ र माओवादी केन्द्र उम्मेदवारले १३ हजार ७ सय ५१ मत पाएका थिए।
एमाले र माओवादी उम्मेदवारले वडा तहमा पाएको मत जोड्दा यी १९ वडामा ३४ हजार ५ सय ९५ मत पुग्छ। जबकी यिनै वडामा काँग्रेसको जम्मा २३ हजार ४ सय ८५ मत मात्र छ।
यो क्षेत्रमा पर्ने माडी नगरपालिकाको ९ वटा वडामा काँग्रेसले जम्मा ३ हजार ४ सय ३६ मत पाएको थियो। एमालेले ४ हजार २ सय ३८ र माओवादीले ३ हजार ७ सय ६६ मत पाएको थियो ।
एमाले र माओवादी वडा अध्यक्ष उम्मेदवारहरुले पाएको मत जोड्ने हो भने ८ हजार २ मत हुन्छ ।
यसरी हेर्दा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गत पर्ने भरतपुर महानगरपालिकाका १९ वडा र माडी नगरपालिकाका ९ वडामा काँग्रेसले जम्मा २६ हजार ९ सय २१ पाएको छ।
यी वडामा माओवादी र एमाले उम्मेदवारहरुले पाएको मत जोड्दा ४२ हजार ५ सय ९५ हुन आउँछ।
तीन नम्बर क्षेत्रमा पर्ने यी वडामा राप्रपाको पनि ८ हजार ३ सय २२ मत छ।
काँग्रेस र राप्रपा एउटै गठबन्धनमा बसे भने यसको पक्षमा ३४ हजार मत हुन्छ।
पछिल्लो स्थानीय चुनावमा जसले माओवादी र एमालेलाई मत दिए, ती सबैले आउने चुनावमा प्रचण्डलाई नै मत दिन्छन् भन्ने छैन। त्यस्तै काँग्रेस-राप्रपाले पाएको भोट पनि यी दुई पार्टीको संयुक्त उम्मेदवार बन्यो भने उसैले पाउँछ भन्ने पनि छैन।
मतदाताले पार्टी मात्र नभएर उम्मेदवार पनि हेर्छन्। उम्मेदवारका हिसाबले प्रचण्ड सबभन्दा शक्तिशाली हुने नै छन्। ती मतदाता जसले रेणुलाई मत दिएर जिताए, उनले प्रचण्डलाई मत दिन्नन् भन्ने कुनै बलियो आधार छैन।
त्यसैले चितवन ३ बाट प्रचण्ड उठे भने उनी त्यो क्षेत्रको बलियो दावेदार हुनेछन् र चुनाव जित्ने सम्भावना बलियो हुनेछ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज १९, २०७४, ०६:५९:३८